DEG DEG: Maxaadan Ogeyn oo hada ka socda Magaalada Muqdisho iyo Madaxweyne Farmaajo oo… – dooycad.WordPress.com
Written by shabakada arimaha bulshada ee www.dooycad.WordPress.com May 15, 2017
DEG DEG: Maxaadan Ogeyn oo hada ka socda Magaalada Muqdisho iyo Madaxweyne Farmaajo oo…
Waxaa xiligan Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay laguna xusayo aas aaska Ururka Dhalinyarada SYL oo la aas aasay 15-ka May 1943-dii ayaa kasocota garoonka Kubada Cagta Banaadir ee kuyaala Degmada Cabdi Casiis.
Munaasabada waxaa ka qeyb galaya, Ra’isul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya, Wasiiro katirsan Xukuumada, Xildhibaanada labada Aqal, Gudoomiyaha gobolka Banaadir , Saraakiil ciidan iyo masuuliyiin kale.
Garoonka Munaasabada ka socoto waxaa Mahrajaan cajiib ah kusoo bandhigay dhalinyarada ciyaaraha gobolka Banaadir, waxaa sidoo kale garoonka lagu soo bandhigay heeso wadani ah iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka .
Madaxweynaha Soomaaliya oo horey loo sheegay in uu ka qeyb galayo munaasabadan ka dhaceysa garoonka Banaadir ayaa ka baaqsaday, waxaana dadweynihii munaasabada kasoo qeyb galay Khudbad u jeediyay R/Wasaare kuxigeenka Soomaaliya.
Farmaajo ayaa tagay halka ay kutaalo Taalada SYL ,waxa uuna halkaasi dhigay ubax xasuus ah , waxa uuna Madaxweynaha hambalyo u diray Umada Soomaaliyeed munaasabada 15-ka May owgeed, waxa uuna ugu baaqay dhalinyarada in ay isku duubnaadaan.
Riix halkaan hoose
Tagged by mukhtar wadani.
Previous Post sheeko ku saabsan naag iyo sedex nin oo ay saaxibo la ahayt
Next Post Watch “Boqorka jaceylka Hindi afsoomali ah” on YouTube